Umugqa we-PVC Pipe Extrusion - Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd.
Amafasitela e-PVC nolayini wokukhiqiza iphrofayli yomnyango
PP PE PVC odongeni olulodwa lukathayela ipayipi extrusion ...
Umugqa wepayipi we-PPR extrusion
PE ipayipi extrusion umugqa
Umugqa wepayipi le-PVC extrusion
Isungulwe ngo-2000, iZhangjiagang City Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd ingumkhiqizi okhethekile wemishini yepulasitiki. Akhiwe No. 78 Baixiong Road, Sanxing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Isifundazwe Jiangsu, China. sijabulela ezokuthutha elula. Inkampani yethu ithatha indawo engu-8,000 m2 futhi inezinsiza ezithuthukile ze-double-screw extruder, i-single-screw extruder, amasethi wemigqa yokukhiqiza yokukhipha kanye nemishini yokusiza.
Ngemvume yokuthekelisa, sithumela imikhiqizo ezifundazweni ezingamashumi amabili nesishiyagalolunye, emadolobheni kanye nasezifundeni ezizimele futhi zithunyelwa eRussia, e-Afrika, empumalanga Ephakathi naseningizimu-mpumalanga ye-Asia.Imikhiqizo yethu izuza izindumiso ezibanzi ekhaya nakwamanye amazwe. Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kwenziwa kuzo zonke izinqubo kusuka kokuhlonza okokusebenza, ukucubungula nokuhlola kuze kupakishwe.
Ukwethulwa Komkhiqizo Kwamapayipi wePolypropylene (PP-R) wamanzi ashisayo namakhaza
Amapayipi nokufakwa kwe-PP-R kususelwa kokungahleliwe okune-polypropylene okhiqizwe njengezinto ezingavuthiwe ezinkulu futhi kukhiqizwa ngokuya nge-GB / T18742. I-Polypropylene ingahlukaniswa ibe yi-PP-H (i-homopolymer polypropylene), i-PP-B (i-block copolymer polypropylene), ne-PP-R (i-copolymer polypropylene engahleliwe). Umshini ipayipi lukathayela kabili udlala indima ebalulekile ekukhiqizeni ipayipi. I-PP-R yinto ekhethwayo yamapayipi we-polypropylene wamanzi ashisayo nabandayo ngenxa yokumelana kwayo isikhathi eside nengcindezi ye-hydrostatic, ukuguga kwe-oxygen ukumelana nokushisa isikhathi eside nokucubungula nokubumba.
Ukusetshenziswa kwe-PE Pipe
1. Ipayipi lezimayini le-PE Phakathi kwawo wonke amaplastiki ezobunjiniyela, i-HDPE inokumelana nokugqokwa okuphezulu kakhulu futhi ibonakala kakhulu. Ukuphakama kwesisindo samangqamuzana ...
Amapayipi e-PVC athatha amapayipi e-PVC-U ukuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengempahla eyinhloko eluhlaza. Ziyangezwa nge-additi edingekayo ...